सांसदसँगै राजनीतिक नैतिकता पनि आइसियूमा - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
सांसदसँगै राजनीतिक नैतिकता पनि आइसियूमा
काठमाडौं। सत्ताका लागि ५० को दशकमा मौलाएको असंसदीय राजनीतिको पुनरावृत्ति हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन एक निर्णायक सांसद नाटकीय रूपमा ‘आइसियुमा’ भेटिएका छन् । उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसका लागि सत्तारुढ दललाई आरोपित गरेको छ ।
बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक ‘बेपत्ता’ भएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण काम प्रभावित भयो । तर, जब प्रदेश सभा स्थगित भयो, कोरोना पजिटिभ भएको भन्दै शाही अस्पतालको ‘आइसियू’मा भेटिए । जबकि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उनी कोरोना नेगेटिभ भएको रिपार्ट बुधबार बिहान नै दिएको थियो ।
गण्डकीको सत्तासमीकरणमा सांसद शाही कति महत्वपूर्ण थिए भन्ने त्यहाँको अंकगणितको तस्बिरले देखाउँछ, जुन तस्बिर बुझेपछि उनी ‘बेपत्ता’ भए वा बनाइए भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाइदिन्छ । अविश्वास प्रस्तावमाथि बुधबार प्रदेश सभामा मतदान हुँदै थियो, गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि जनप्रतिनिधिले फैसला गर्दै थिए । प्रदेश सभामा ६० सदस्यमध्ये कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई गरी ३१ जनाले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने योजना प्रतिपक्ष दलहरूको थियो । मंगलबार रातिसम्म उनीहरू यसमा विश्वस्त पनि थिए ।
तर, जब बुधबार ‘जनमोर्चा’का सांसद शाही ‘बेपत्ता’ भए, प्रतिपक्ष दलहरू तनावमा देखिए भने सत्तापक्ष सांसद उत्साही । जनमोर्चाको केन्द्रले नै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन सांसद रहेको जनमोर्चाका दुई सांसद पियारी थापा र कृष्ण थापा भने प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित थिए ।
जब कि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा शाहीको अनुपस्थितिले ३० जना मात्र हुने भएपछि प्रस्ताव फेल हुने खतरा थियो । मतदानमा शाहीको अनुपस्थिति सत्तासमीकरणको दृष्टिकोणले निर्णायक थियो । यही कारण बुधबार दिनभर उनको ‘अज्ञात अवस्था’ शंकाको घेरामा परेको हो । संसद्मा एमालेका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । मतदानपूर्वसम्म मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा थिए ।
मंगलबार एमाले प्रदेश सभा सांसद मोहन रेग्मीले मत विभाजन हुने वेलासम्ममा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने दाबी गरेका थिए । ‘केही दलका सांसदले हाम्रो इच्छा त सरकारलाई निरन्तरता दिने नै हो, तर केन्द्रबाट निर्णय भएर आएपछि गाह्रो भयो भनिरहनुभएको छ । उहाँहरूले पार्टीको केन्द्रमा कन्भिन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ । कर्णाली र लुम्बिनीको संस्कार पनि यहाँ आउन सक्छ । यी र यस्तै कारण सरकार जोगिनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भनेका थिए । एमाले प्रदेश सभा सांसद रेग्मीको इसारा जनमोर्चाका सांसदतिर थियो ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको अघिल्लो दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले उठेर कोरोना परीक्षणको विषय उठाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । बैठक अवरोधबारे एमाले सांसद राजीव पहारीले कोरोना परीक्षण नगरी बैठक बस्नु सबैका लागि खतरा रहेको बताएका थिए । त्यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको सूचनापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए ।
सांसद नाटकीय रूपमा ‘बेपत्ता’ जनमोर्चाका सांसद शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको र अवस्था थाहा नहुँदासम्म संसद्को कारबाही रोक्न उनकै पार्टीका सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिइन् । शाहीको खोजी माग गर्दै पेस भएको निवेदनका कारण गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावउपरको मत विभाजन रोकिएको छ ।
उनकै निवेदनको व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले थापाको निवेदनमाथि सम्बोधन नगरी सदन सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको सूचनामार्फत जानकारी दिए । बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक १ः४० मा सुरु भएको थियो । ४ बजे सभामुखले खाजाका लागि भन्दै २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सोही समय थापाले निवेदन दिएपछि सभामुखको सोही निवेदनलाई आधार मान्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन आइसियुमा राखिएको दाबी गरेको छ । पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ, ‘उनी बिरामी हुन् भने हामीले भेट्न किन नपाउने ? सांसद खरिदबिक्रीका लागि भएका भेटघाट र अस्पताल बसाइका वेला उनी साच्चै संक्रमित भए भने उनको स्वास्थ्य र जीवनको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।